Fandosirana ny fahatezeran’Andriamanitra
"Ary rehefa hitan’Andriamanitra ny nataon’ireo ny amin’ny nialany tamin’ny lalan-dratsiny, dia nanenina Izy ny amin’ny loza izay nolazainay hamelezana azy, ka tsy nataony intsony izany.“ " Jaona 3:10
Ny bokin’i Jona dia isan’ny iray amin’ny boky faminaniana, tafiditra isan’ny sokajin’ny atao hoe “mpaminany kely“. Tantaran’ny mpaminany iray izay nirahan’Andriamanitra hampibebaka tanàna iray atao hoe: “Ninive“, saingy noho ny fahalemeny, dia nitady lalan-kafa izy hialana amin’izany iraka nampanaovina azy izany. Kinanjo, loza no nanjo azy, ary ny farany dia tsy maintsy nakany Ninive ihany, nanambara nanerana ny tanàna ny loza hanjo azy, noho ny amin’ny fahotany.
Rahefa nanatanteraka ny baiko nanirahana azy i Jona, dia nahavariana ny vokatr’izany:nibebaka ny vahoaka iray manontolo nanomboka hatrany amin’ny mpanjaka ka hatrany amin’ny vahoaka madinika indrindra. Nino an’Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadian-kanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin’ny lehibe ka hatramin’ny kely. Nitafy lamba fisaonana hatramin’ny mpanjaka, nifady hanina avokoa na olona, na biby fiompy, samy nitaraina tamin’Andriamanitra ary samy niala tamin’ny ratsy fanaony avokoa.
“Ary rehefa hitan’Andriamanitra ny nataon’ireo tamin’ny nialany tamin’ny lalan-dratsiny…“ izay no ambara eto: tsy miafina eo anatrehan’Andriamanitra ny fibebahana marina. Filazana loza no nasainy nataon’i Jona ary finoana sy fibebahana no vokatr’izany.
Ry Havana, malala ny fibebahana marina dia ilaina amin’izao fotoana izao. Ny tena fibebahana marina dia atao eo anatrehan’Andriamanitra ary tokony hisy asa mivaingana sy azo tsapain-tanana. Finoana lehibe no teo amin’ireo mponina tao na dia Jentilisa aza. Niala tamin’ny ratsy fanaony izy ireo. Tsy fombafomba fotsiny ny fibebahana (fitafiana lamba fisaonana, fifadian-kanina, …), fa fanavaozana ny fiainana iray manontolo.
“Dia nanenina Izy ny amin’ny loza izay nolazainy hamelezana azy, ka tsy nataony izany": ny fibebahana maraina dia ahazoana famindram-po, hahafahana amin’ny loza sy ny antambo izay saiky nihatra.Ny Andriamanitry Israely dia Andriamanitra fitiavana, onena manoloana ny fibebahana sy ny fanetren-tena marina.
Mipetraka ary ny fanontaniana manoloana ny loza mahatsiravina izay mitranga ankehitriny etsy sy eroa. Namindra fo ve Andriamanitra sa tsy namindra fo, nibebaka ve ny vahoaka tao amin’ilay firenena, sa tsy nisy mpaminany nitondra ny tenin’Andriamanitra tao, na koa nivily lalana any amin’ny toeran-kafa toa an’i Jona. Mila mandinin-tena ny Fiangonana sy ny Mpanompon’Andriamanitra manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Ry kristianina Havana, ry mpamaky tsy ankanavaka. Ny tantaran’i Jona dia tantaran’ny Fiangonana sy izao tontolo izao. Irahin’Andriamanitra ny Fiangonana sy ny Mpitory, nefa mandeha marina amin’izay andidian’Andriamanitra antsika ve isika? indrindra ny asa lehibe izay miandry antsika any amin’ny jentilisa! Tandremo fa ny Fiangonana indraindray matory, na variana any amin’ny zavatra hafa (politika, …) mbola midadasika ny saha, koa miandry antsika ny jentilisa, izay miandry ihany koa ny fahatezeran’Andriamanitra amin’izy ireo raha tsy misy mampibebaka.
Ho antsika rehetra kosa, te handositra ny fahatezeran’Andriamanitra izany ve isika? Ndao hibebaka marina tahaka ny mponina tao Ninive isika. Tanana maro ankehitriny no ravan’ny dahalo, ny tafio-drivotra, ny horohoron-tany, areti-mandringana… finoana sy fibebahana marina, tamin’ny alalan’i Jona izay natelin’ny trondro be, no namonjena an’i Ninive. Finoana an’i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin’ny maty sy fibebahana ihany koa no hany hamonjena ny olona rehetra. Ndeha hampiasaina ny fomba rehetra hambaboana ny olona rehetra ho an’i Kristy.